Ikhabhinethi yeHemlock yaseMantla Muskoka
Kumantla eMuskoka kuhleli le paradesi incinci. Le ndlu ye-square foot 325 yaqala yakhiwa njengenkampu yokuzingela ngo-1955 kwaye isanda kulungiswa ukuba ibe yeyangoku kwaye ikhululekile ngelixa igcina umtsalane wayo we-vintage rustic. Yiza ukhuphe iplagi kule ndawo ilula ithuleyo kuphela imizuzu emi-5 ukusuka elunxwemeni lwase-Ilfracombe. Uninzi lweemvumi/ababhali beengoma baye barekhoda kule khabhinethi kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye ngoku ivulwa njengendawo yokuphumla ezolileyo.
Yiza ukhulule kule ndlwana incinci izolileyo. Le khabhathi inesilingi zeenyawo ezili-10 ezigqityiweyo ngesarha erhabaxa yasempuma yehemlock. Kukwakho nebhafu yesiqingatha esilula kunye neshawari yabucala yangaphandle.
* Nceda uqaphele ishawari yangaphandle iya kuqalisa ngoNovemba-Matshi *
Le Hemlock Cabin ikwimizuzu engama-25 kumntla ntshona wedolophu yaseHuntsville kunye nemizuzu emi-5 ekhawulezayo yokuqhuba ukuya e-Ilfracombe elunxwemeni, ekwichibi laseBuck. Kukho amachibi amaninzi akufutshane okuloba kunye nokubhexa. (Sinephenyane elidala ovumelekileyo ukuba uliboleke) kunye neendlela ezolileyo zokugawula imithi yokuhamba nokukhwela ibhayisekile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sprucedale